Extinction Rebellion sy antso ho an'ny hetra ambony sy fifehezana tanteraka ny antsipirian'ny fiainanao: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 14 Oktobra 2019	• 4 Comments
Ny fikomiana tanteraka ary ny mpanao fihetsiketsehana ny toetrandro dia miantso anao handondona vola bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampidirana rafi-pandoa hetra manerantany. Aiza any Shina sy India izy ireo dia tsy mandray anjara amin'ny fanjavonan'ny toetrandro sy ny tobin-tsolika arifomba ao Shina dia mivadika ny tany 3x herinaratra be mamokatra mihoatra noho ny famokarana herinaratra eran-tany eran-tany, ny toeram-pamokarana herinaratra arintany ao Eropa dia tsy maintsy manakaiky ny hampihena ny famoahana CO2.
Fantatrao ve fa tsy misy fiovana ny fatran'ny CO2 eny amin'ny rivotra? Ireo mpikatroka toetrandro dia mbola mamerimberina izany lainga izany, nefa tsy tafiditra amin'izany mihitsy. Ny CO2 dia sakafo ho an'ny zavamaniry sy ny hazo ary ny singa 0,04% amin'ny rivotra iainana fotsiny. Tsy solika misy poizina izany, fa entona tsara. Ny CO2 dia entona ilaina ahodina ho oxygen amin'ny alalan'ny hazo sy ny zavamaniry. Tsy miakatra ny mari-pana eto an-tany, fa ny fandaniam-ketra ataonao foana.
Ny mpikatroka toetrandro dia indrisy miady amin'ny olana sandoka noforonina. Tanjona manan-danja? Mandondona vola bebe kokoa avy ao am-paosinao. Tsy mino izany ve ianao? Avy eo dia jereo ny fitomboan'ny hetra alaina etsy ambany Washington Post:
Mampiseho izany fa ao amin'ny Vondrona 20 toekarena lehibe indrindra, ny hetra dia mampiakatra ny vidin'ny angovo amin'ny salanisan'ny 43 isan-jaton'ny herinaratra ary ny 14 isan-jato ho an'ny solika ao amin'ny firenena noheverina.
Ny olona mitsikera ny lojika momba ny fikatrohana toetrandro dia mahazo ny Star an'ny David amin'ny stigma 'denier toetr'andro'Niraikitra. Hajia feno tsinontsinona, satria tsy afaka mandà ny toetrandro ianao, toy ny tsy ahafahanao mandà ny ozatrao. Misy ny toetrandro. Toe-javatra voajanahary ny toetrandro. Ny CO2 dia tena tsara ho an'ny toetr'andro ihany, araka ny fanazavan'i georgysicist Willie Soon ao amin'ny lahatsary etsy ambany. Ny siantifika izay mametraka ny fandaharam-potoana hametrahana ny hafananana pihetsika ara-tsaina aza manompo dia navilamina. Toa mihatra ihany koa ny fitsipika eto 'izay mandoa no mamaritra'.
Ny hery mpitondra fiara ao ambadiky ny hetsika Extinction Rebellion dia nanintona ny fijanonana rehetra mba hilalao ny vahoaka ary tsy misalasala misokatra malalaka ny hoe fanararaotana no nilalao. Toa izany no fomba vaovao hanaratsiana ny tsikombakomba: Asehonay misokatra fotsiny fa mampiasa fomba fiasa CIA izahay ary mampiseho malalaka izahay fa mandoa mpanao fihetsiketsehana.
Eny, antoka! Extinction Rebellion no mifanaraka amin'ny Kaody 'revolisiona miloko' Gene Sharp izay am-pahefana maro no noteren'ny imperialism amerikana. Ka fantatrao hoe inonadia mirehareha fotsiny isika ary mampihatra izany amin'ny hetsika fanoherana ny toetrandro". Eo ambany fitenenan 'mamaly ratsy ny ratsy'Angamba? Endrey, inona no mahasamihafa azy! Ny farany dia manamarina ny fomba, ho avy ny eritreritra. Ary avy eo nanondraka ny ahitra teo ambanin'ny tongotry ny mpitsikera ianao. Azontsika ampiharina amin'ny fomba tsotra io fomba io izay nanampy ny firenena sy ny toe-karena mba hifanome tànana, mba hahafahan'ny NATO hamoaka ny baony ao aoriany sy ny IMF hampielezana ny trosany ary hamotika ireo firenena amin'ny hegemony amerikana. Mazava ho azy fa eo ambany fitaterana ny fitondrana demokrasia. Izany dia NATO Stratfor departemanta izay tompony sy tompon-kevitra amin'ity ady ara-tsaina ity. Tsy misy maharatsy an'io?
Misy olona milaza ve fa ny Extinction Rebellion dia tratra dia tratra mpikatroka voaloa ireo? Ah, ireo mitovy amin'ny olona manao ny "David denier iklim" an'ny Star of David. Ireo no olona tsy mahita fa azo atao daholo amin'ity indray mitoraka ity. Azontsika ampiasaina ny ONG sy ny vola any George Soros na olon-kafa. Ny fomba rehetra dia avela atao an'io tanjona masina io. Tanjon'ny fitomboan'ny hetra manerantany, misaotra ireo mpitantana ny revolisiona matihanina. Ny mpitsikera rehetra dia mifamatotra amin'ny alàlan'ny varotra maloto amin'ny marika 'tsara' vita tsara (anglisy: elatra havanana). Io marika elatra havanana io dia mifandray amin'i Donald Trump, Boris Johnson ary (akaiky ny tranony) ny Thierry Baudet's sy Marine LePen amin'izao tontolo izao. Tamin'ny faran'ny toekarena amerikana taty aoriana mitsoka ary hanao ny debara Brexit amin'ny loza any Eurozone, dia niatrika izay rehetra nieritreritra tao 1x ianao ary nesorinao mazava tsara ny tsikera rehetra izay nampifandraisanao an'io marika io. Izay no paikady.
Ny fikatrohana ny toetrandro dia mikasika ny fanatikam-pivavahana tsy misy porofo. Ilay Andriamanitra vaovao dia "ny toetr'andro" ary mety hampiasa ny fanarahana sy fiantraikany lehibe amin'ny mponina maneran-tany i Papa Francis amin'ny May 2020 Vonona ny ho etona. Mandeha mankany amin'ny tontolo tontolo isika ho toy ny mpialoha lalana ny governemanta eran-tany izay hianjera ny zava-drehetra sy ny olona rehetra eo ambanin'ny 'Internet of things'. Malala-tanana fa tsy ho ela dia hanana tambajotra 5G maneran-tany isika; nohodidinin'ny masoivoho eny amin'ny habakabaka toy ny ESA (jereo eto ambany). Ao amin'ny 'Internet ny zava-drehetra' ny fifanakalozana rehetra dia tsy ho ela dia ho azo jerena ary raha afaka amidy amin'ny alàlan'ny «Avy eo ahitantsika ny habetsaky ny CO2 avoakao, ny hena hohaninao ary ny plastika laninao“, Azonao atao ny mifehy ny antsipiriany rehetra amin'ny fiainana an'izao tontolo izao eo ambanin'ny alibi amin'ny 'toetr'andro'. Ny sinoa Rafitra Sesame Credit dia efa misy fitsapana mahafinaritra.
Ny tontolo iainana no miantso anao ho fanandevozana faratampony. Ny fanatisma miaraka amin'ny fidiram-bola fanampiny amin'ny maha-mpikatroka matihanina dia midika fa manampy ireo olona ireo hanafaingana ny fananganana rafitra fanandevozana dizitaly. Mbola efa niresaka bebe kokoa izahay fa tsy ireo akora vita amin'ny synthetic ampiasaina amin'ireo "sora-baventy" azo antoka amin'ny tontolo iainana "rehetra ireo. Ny fonja tsy misy bara miharihary dia saika zava-misy ary mihazakazaka amin'ny alàlan'ny fanatikana ny toetrandro izany.
Lisitry ny rohy loharano: washingtonpost.com, mailonsunday.co.uk, nowhere.news, nowhere.news, alt-market.com
Tags: entana, hetra, Fikomiana mihintsy, Featured, toetr'andro, mpikatroka toetrandro
14 Oktobra 2019 ao amin'ny 08: 46
Raha ny fahefana taloha taloha amin'ny làlan-dranomasina dia misy lanjany lehibe, izao no vanim-potoanan'ny fananana. Ny antony nanatanterahana izany dia zava-dehibe, raha ny hevitro dia ny hanangana kilasy vaovao iray izay afaka miasa toy ny mari-pahaizana hanomezana habetsaky ny vola nateraky ny tonon-taony ho fanalefahana malefaka mba hahafahan'io lalao io hitohy toy ny mahazatra. Ny asetsika kilasy misy habetsaky ny haben'ny fananana dia afaka manintona ampahany amin'ny sandan'ny vola mivoaka avy amin'ny amponga azo avy amin'ny tena trano.
14 Oktobra 2019 ao amin'ny 17: 00
Izy io dia soritr'aretina, vokatra vokarin'ny atidoha nandritra ny am-polony taona araka ny modely kômonista.
Ireo mpianatra izay mandray anjara dia izay nofaritan'i Lenin ho toy ny tsotsotra mahasoa ao amin'ny lalao misy ny tanjaky ny fahefana sy fifehezana ny lafiny rehetra amin'ny fiainana. Ohatra tonga lafatra amin'izany i Shina ...
15 Oktobra 2019 ao amin'ny 18: 00
Tandremo, manana iray hafa isika izay haneho ireo olona mitsikera rehetra manakorontana.
Tantara hafahafa momba ny 9 taona niaina tao anaty lakaly ambany miaraka amin'ny fianakaviana, izany hoe ny iray amin'ireo zaza dia 16 tamin'ny niantombohan'izy ireo. Mbola tsy nianatra tany, niandry ny fotoana hiafarany.
Mieritreritra aho fa ny ankizy 16 dia tsy maniry hianatra, fa an-tsitrapo izy ireo mipetraka ao anaty basement.
Ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe tsy mahavita tena ianao, ny fanaovana ny tenanao sy ny zanaka atao vaksiny ary tsy misy sekoly. Mpivady Crazy 😉
15 Oktobra 2019 ao amin'ny 21: 30
Tena… mialoha ahy ianao
Efa niaraka tamin'ny lahatsoratra iray.
Ny PsyOp manaraka afaka mahavita 1x karohina ao anatin'ny fotoana fohy ... ka toa amiko izany
Fa rehefa nanoratra an'io dia hangalatra ny scoop i Jensen na Niburu.co
« Ilay talen'ny fikomiana tamin'ny Extinction Margaret Klein Salamon: "Ny dingana manaraka dia ny maneho hoe marina ny fahamarinana"
Ruinerwold Drenthe sy ny fianakaviany, ny asa ara-tsaina manaraka (PsyOp) ho an'ny fanjakana bebe kokoa »
Total visits: 14.000.215
Ben op Mampiseho ny UN manifesto '90: ny fepetra momba ny toetrandro noforonina hampihatra ny governemanta manerantany